အမျိုးသမီးမျောက်အောက်ခြေ (၂၀၀၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ကိုကြည့်ရှုရန်မျောက်များသည်ပေးဆောင်သည်
မျောက်ရဲ့နောက်ဖက်ကြည့်ဖို့ပိုက်ဆံပေးမလား။ မမျှော်လင့်ဘူး မျောက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ငါထင်တာတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လူ့ဘုံမှာထောင်ထဲမှာယောက်ျားတွေကိုဖမ်းမိတဲ့အရာမျိုးနဲ့အရမ်းနီးစပ်နေတယ်။
Rhesus macaque မျောက်များသည်အဆင့်မြင့်မျောက်ဝံများဖြစ်သောခွေးများအတွက်ထိပ်တန်းခွေးများနှင့်ဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်လည်းတင်ထားသည်။ လူမဂ္ဂဇင်းကိုသင်ဝယ်ချင်သလိုဖြစ်မယ်။
Duke University Medical Center မှ Michael Platt က“ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဒီအချက်အလက်တွေကိုလေ့လာမှုတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်တခြားသူတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်တွေ့မြင်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိကြသည်။
ယင်းနောက် Platt နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလူအလားတူစမ်းသပ်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်ချင်တာပေါ့။
“ အခုအချိန်မှာတော့ဒီဟာကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီမျောက်တွေနဲ့လူတွေမှာအလားတူဖြစ်စဉ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါတို့ယုံကြည်တယ်။ “ နောက်ဆုံးမှာတော့လူမဟုတ်တဲ့မျောက်ငယ်တွေနဲ့လူသားတွေအတွက်မျောက်ဝံဆင့်ကဲဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှာတူညီတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေမှာလူတွေဟာလူတစ် ဦး ချင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်အာရုံဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုလူတွေတန်ဖိုးထားပုံကိုတူညီတဲ့နည်းနဲ့တည်ထောင်ချင်ကြတယ်။ ”
သောကြာနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်လေ့လာမှု, ဝေးမျောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါပျောက်ကင်း Autism Now ကို Foundation မှအမျိုးသားအင်စတီကျုကကမကထပြုခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာလူနာကူညီပေးနေဆီသို့မျက်စိနှင့်အတူဦးနှောက်၏လူမှုရေးစက်ယန္တရားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
“ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေထဲမှာအဓိကပြproblemsနာတစ်ခုကအခြားသူတွေကိုကြည့်ဖို့အရမ်းလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့သူတို့လုပ်ရင်တောင်သူတို့ဟာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးပါမှု၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ဖော်ပြချက်တွေအကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုအကဲဖြတ်လို့မရဘူး။
မျောက်များသည်“ သာမာန်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုကိုမည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံ” ပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မယန္တရားများကိုလူသားများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဒီတိရိစ္ဆာန်များမှာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၌တွေ့ရသောလိုငွေပြမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တုပနိုင်၊
Curr Biol ။ 2005 Mar 29;15(6):543-8.
Deaner ro1, Khera AV စနစ်, Platt ML.
တစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်ချက်ချတိုးတက်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးထား။ လူမှုရေး interaction ကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စဉ်ကိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါ, အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်သင့်သည်။ မျောက်လူ့အဖွဲ့အစည်း, kinship, ကြီးစိုးနှင့်မျိုးပွားမှုအနေအထားကိုခုနှစ်တွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်စနစ်တကျလူမှုရေးအချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသင့်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီသရုပ်ပြဖူး။ ဤတွင်ကျနော်တို့မျောက် differential လူမှုရေးပုံရိပ်တွေ၏အထူးသဖြင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. အမြင်သတင်းအချက်အလက်ဆည်းပူးရန်အခွင့်အလမ်းကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြသပါ။ အထီးစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအမျိုးသမီး perinea နှင့်မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုမျောက်များ၏မျက်နှာများကိုကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်အရည်ယဇျပူဇျောပေမယ့်အနိမ့် status ကိုမျောက်များ၏မျက်နှာများကိုကြည့်ရှုရန်အရည်ပိုမိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လူမှုတန်ဖိုးကိုဘာသာရပ်များ, ပြသထားသောအထူးသပုံရိပ်တွေ၏လွတ်လပ်သောဖြတ်ပြီးအလွန်အမင်းတသမတ်တည်းကြီးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုရန်ရှေးခယျြခဲ့ပုံကိုရှည်လျားဘာသာရပ်များသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအမြင်အာရုံ Oriental ဆုံးဖြတ်ချက်များအမြင်အာရုံအချက်အလက်များ၏တိကျသောလူမှုရေးအကြောင်းအရာများရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်မျောက်ကောက်ကာငင်ကာလူမှုရေးအဆင့်အတန်းအပေါ်အခြေခံပြီးတခြားသူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုခွဲခြားသောပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုသရုပ်ပြပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏ neuroendocrinology (2017)